Isitudiyo seSitudiyo seNtaba yanamhlanje kunye neCozy Heinzenberg
Zindwendwe ezithandekayo zeeholide
Nice unomdla kwiflethi yethu. Silusapho oluncinci olusuka eZurich kwaye sifezekise iphupha elikhulu ngale gem encinci eLescha.
Indlu inamagumbi amabini. Sisebenzisa amagumbi aphezulu njengeeholide zethu zabucala kwaye singathanda ukurenta igumbi elisezantsi kwiintsapho ezincinci, abathanda indalo, abathanda imidlalo kunye namagcisa okuphumla.
Sayilungisa le ndlu ekupheleni kuka-2019. Le ndlu yeyangoku, inefenitshala esebenzayo kwaye inika intuthuzelo eninzi ukuze uzive ulungile. Umgangatho omhle weplanga wenza i-ambience efudumeleyo kwaye ifestile enkulu yangaphambili inika umbono ophefumulayo.
Ikhitshi litsha kwaye linayo yonke into oyifunayo ukwenza isidlo esimnandi. Indawo yokuhlala enkulu inebhedi ephindwe kabini (160 cm x 200 cm), ibhedi ye-sofa (140x200) kunye netafile enkulu. Ukuba unqwenela, ukhuko lunokubekwa ngaphakathi. Kwigumbi elincinci elidibeneyo ungabeka imithwalo yakho. Igumbi lokuhlambela likwahlaziywa ngokutsha, libanzi kwaye lineshawa enkulu ekumgangatho osezantsi.
Utshintsho oluncinci lolwendlu kwaye kukho ithuba lokuhlala kwaye uhlale ngaphandle emlilweni.
Ungaqhuba ukuya kwigumbi ngemoto ukothula umthwalo wakho. Indawo yokupaka imalunga nama-50m kude.
Indawo ikumema ukuba uphumle kwaye ube.
Ummandla ongqonge iSarn ubonelela ngemisebenzi emininzi. Ebusika, indawo yekhephu yaseSarn/Heinzenberg kukuhamba imizuzu emi-5. Indawo yekhephu encinci kunye nelawulwayo ifanelekile kuzo zonke iintlobo zemidlalo yasebusika (i-sledging / sledging, skiing / snowboarding). Nangona iyenye yeendawo ezincinci zekhephu, unendawo eyaneleyo, inkululeko kunye namathuba okufumana iintsuku ezigqibeleleyo zekhephu. Ukubaleka kwetobo kuhlala kumnandi! Kakade ke, iitobogans/izileyiti zinokuqeshwa kwirenti ka-Erny kanye ecaleni kwesitulo.
Kummandla okufuphi kukho indawo yokutyela enkulu nelungele abantwana iLescha, ebonelela ngezinto ezizodwa zengingqi, phakathi kwezinye izinto.
EThusis (imizuzu eli-10 ngemoto) kukho iivenkile ezininzi. (Aldi, Lidl, Coop, Migros, njl.)
Iindawo ezinkulu zeski nazo zikufuphi. (Lenzerheide, Flims/Laax). Bonke banokufikelelwa malunga nemizuzu engama-30 ngemoto.
EAndeer kukho iparadesi entle. (ibhafu yeminerali)
Ehlotyeni, lo mmandla waziwa ngemizila yebhayisekile yeentaba kunye neendlela ezingenakubalwa zokuhamba.
Enye yezona ndawo zinkulu eSwitzerland ikwiLandquart.
Sinokusoloko sifumaneka ngomnxeba. Sinebhokisi ephambili xa singekho kwisiza.